Ukwedlulisa umqondo obanzi, futhi wonke umuntu uyaqonda into ehlukile ngaphansi kwalo. Lokhu kungaba ukuhlukumezeka, nokuphulwa kwezinto ezithandwa ngumuntu oseduze, nokuphulwa kwanoma yisiphi isithembiso noma isifungo, nokudluliselwa kolwazi oluyimfihlo kubantu besithathu, nokudluliselwa komuntu oseduze (isibonelo, umngane) "ekamu lesitha" nokunye okuningi. Kodwa iqiniso lilokhu lokuthi ukukhashelwa emphefumulweni kuhlala isilonda esicindezelayo emva kokukhashelwa, futhi umuntu uphelelwa ukholo kubantu. Indlela yokusinda ukukhawulwa komuntu othandekayo?
Sonke sifuna ukusekelwa kubantu abasondelene nathi, sibathembele, sembule izimfihlo zethu, sikholwe ukuthi ngeke sidukiswe. Sidinga imfudumalo eqotho kanye nomqondo wokuzethemba ukuthi bazosisekela, bazosisiza. Sibeka ithemba lethu kanye nethembiso kulabo abathandekayo futhi sibavumele ezimpilweni zethu nasezinhliziyweni zethu, futhi ngezinye izikhathi sibeka imithwalo yemfanelo kubo ukuze kube khona ukuphela kwethu. Futhi okubuhlungu kakhulu kithi ukukhohliswa, osondelene nomuntu osikhiphe, sasilokhu simethemba kakhulu.
Ukungathembeki kusho ukuthi kwasekuqaleni isivumelwano esaphuliwe, ngisho nangemva kwayo. Lokhu ukwephulwa kokwethemba ezintweni ezibalulekile kubantu. Eqinisweni, noma yikuphi ukukhwabanisa kuwukuhlukumezeka. Kungabi nje ngokomzimba, kodwa futhi ngokuziphatha. Futhi kuhlale kwenzeka ngokungalindelekile, ukukhwabanisa akunakulindelwa ngokugcwele.
Uma ukhashelwa, imizwa ivame ukuphazamiseka. Isibonelo, owesifazane washintshwa ngumyeni wakhe. Yonke imicabango kanye nezenzo zakhe zizobe zithathwa imizwelo ephazamisayo. Namuhla ubheka izizathu zokukhashelwa kwakhe, ukumba ngaphakathi kuye, ukufuna amaphutha akhe, ukuzitshela ukuthi ukukhashelwa kwakhe. Kusasa uyamzonda, ubheka umhlukumezi oshoyo, obhubhisa umshado ojabulisayo. Khona-ke uzizisola ngokwakhe, ukhumbula ukuthi wayengumfazi omuhle kangakanani, umzamo owenza kanjani kulo mshado, uyakhala, awela ekucindezelekeni. Khona-ke, ngaphansi kwamathonya alo mqondo, uqala ukumfuna, ambize, asole, asongele, aqalekise, akhale, acele ukubuya, njll, kuye ngokuthi isimo. Lokhu kungukuziphatha okungalungile, ngoba inkinga isalokhu ingaguquki, lona wesifazane udidekile nakakhulu, umthamo womzwelo wakhe nemizwelo engakwazi ukuyivula. Kudingekile ukuzama ukuxazulula le nkinga, kuzosiza ukuqeda isipiliyoni. Ngaphambi kokunye okumele ukwenze, udinga ukuzola futhi ucabange ngekhanda "elibandayo," ungaphuli ukushisa ekushiseni, bese uphuma imiphumela yalokho okwenziwe ngethonya lokuzizwa kwemizwelo.
Uma uthengiswa, kuzomele uzame ukusinda kulobu buhlungu, uthethelele umuntu bese uvumela isimo. Udinga ukucabanga ngawe, mayelana nezithakazelo zakho nezifiso zakho. Uma wabelane ngamathemba namaphupho nalabo abakukhaphelayo, bakhulule futhi babakhohlwe.
Akugcini nje ukuthi ukukhwabanisa kukulimaza kuphela, kodwa ngisho nemicabango nje ngalokhu ukukhashelwa. Zama ukushintsha umbono wakho ngesimo nemicabango ngakho, tk. Awukwazi ukushintsha okwenzekile. Zama ukubuyisela imicabango emibi ngemicabango yokuhawukela umqashi futhi ungamlaleli.
Ungagodli imizwelo yakho. Gcwalisa izinto ezimbi ngendlela eyamukelekayo, isibonelo, ukukhala, ukumemeza, ukubhala incwadi enobungozi bese uyishisa, shaya umcamelo, ukhulume nomuntu omethembayo, uye ekwamukeleni kwesazi sengqondo. Yebo. Okokuqala kufanele uziqede konke ukungabi nalutho okuhlezi phansi emphefumulweni wakho, okuzokwenza kube nzima, kuphazamise isimo sakho sengqondo, impilo yakho, uphazamise ukuthula kwengqondo yakho. Zonke intukuthelo, ukufutheka, inzondo ongazange usebenze nayo futhi engaphumi, iyokubhubhisa ngaphakathi.
Zama ukucubungula lesi simo engxenyeni yomculi wakho. Ngezinye izikhathi kuyasiza ukusinda ukukhohliswa. Yiba umthengisi endaweni, zama ukuqonda izisusa zakhe. Mhlawumbe indoda ivele iphutha, kodwa ayizange iyenze kabi kuwe. Kulula ukuthethelela umuntu obengalungile kunomuntu owenze ngenhloso nangobuningi. Njengoba impilo ibonisa, noma yisiphi isenzo esibi sinezizathu ezidabukisayo futhi sichazwa ubuthakathaka obuthile bomuntu. Khona-ke ukuhlangana kwezimo, isikhathi, indawo kanye nabantu kugcwalisa lolu daba. Futhi ababuthakathaka nabo kulula ukuthethelela kunabalandeli.
Futhi kuthiwani uma kwenzeka okungenakuxolelwa? Uma lokhu kungeyona iphutha hhayi ububuthakathaka, kodwa izenzo ezimbi zenzalo zomuntu ezikuwe? Uthukuthelele umthengisi, wena ngokwakho nangokwakho okungahambi kahle. Mhlawumbe ucabanga ngokuphindiselela. Kodwa ukomela ukuphindiselela kuyisimo esilimazayo. Ngaphezu kwalokho, abantu abaningi bafuna ukuphindiselela ngentukuthelo, kodwa, njengoba bethi, impindiselo yidlo okumelwe ibanjwe kubanda. Ngakho-ke, shiya umcabango wokuphindiselela, nakakhulu akunakwenzeka ukusiza, ngoba ngeke uqede iqiniso lokuthi uziphatha kabi.
Ukuthethelela ngisho nokungenakuthethelelwa, zama ukuqonda ukuthi yini eyenza umuntu akwenze lokhu kuwe. Wenzeni kuye kabi kangangokuthi wanquma ukukulimaza? Njengoba lokhu kungumuntu omncane, kusho ukuthi kufanele abe nezizathu ezinkulu. Umuntu oseduze angeke akwenze ngokuzithandela. Mhlawumbe nawe wamphatha kabi? Cabanga ngalokho ongakwenza futhi nini. Uma uthola impendulo, cela intethelelo ngaleyo ngxenye yobubi obangele. Uzozizwa ungcono.
Ngenkinga yokuphila okunzima, ikakhulukazi uma ungakwazi ukubhekana nalesi simo, umqondo omuhle uzoba inkambo ye-psychotherapy. Isazi sokusebenza kwengqondo sizokusiza ukuba uziqonde ngokwakho, ngemizwelo yakho nemizwa yakho, ikutshele indlela yokuphila esikhathini esibucayi sokuphila.
Zama ukuthethelela umthengisi bese ukhohlwa. Cabanga ngalokhu manje ngeke ukhulume nomqambimanga ongumuntu ongathembeki, umngane okhohlisayo noma oshade naye (oh), okulungile, ngoba ngeke uzungezwe abantu ababi. Bheka lesi simo ngenye indlela. Uma oshade naye eshintshile (a), ngeke usuholwa yikhala, manje unelungelo lokuhlangana nomuntu omuhle ngempela, othembekile nothando. Uma uthengise umngane, kuhle ukuthi uthola manje, futhi hhayi esimweni esibucayi kakhulu, ukuthi angeke athembeke.
Into eyinhloko ukuthi esikhathini esizayo ngeke usayeke ukuthembela kubantu. Yiqiniso, kufanelekile ukucabanga ukuthi umuntu ufanelwe yini ukuthenjwa futhi avulekele, kodwa uma uzivala ngokuphelele kubantu, khona-ke ngeke ujabule. Umuntu ongeke athembele noma ubani, ubhekene nakho konke okuqala. Awukwazi ukuhlala ngaphandle kokusekelwa, ukwesekwa nokuthembela. Kodwa uma kungenzeka, wazi ukuthi ungaphila kanjani ukukhishwa komuntu othandekayo.
Ngokuzithoba ngifisa sengathi uzothola indoda efanelekile ukuthembela kwakho!
Indlela yokujabula emshadweni
Indlela yokubona uthando ngamehlo nokuziphatha
Siphakamisa ngempumelelo izinga lokuzethemba kwethu
Abantu - "jumpers" banxanela ukubonakala okusha
Ukungapheleli: indlela yokukhetha ingubo yangaphansi
Izinkukhu imilenze ku-grill
Ukugcoba: ukudla okunempilo
Ungadla kanjani ngaphambi kokuya ocansini
Abathandi beDeet Garik Kharlamov noTimur Batrutdinov badelela u-Olga Buzovoy, isithombe
Amanzi okugeza amatafula
Amakhambi omphakathi we-prostatitis angapheli
I-Pate yama-mackerel nama-nati
Amathiphu omuntu: i-eyelashes ende neyinde
U-Anastasia Volochkova wahleka u-Regina Todorenko, isithombe